अव्यक्त भावना (कथा)
Labels: कथा-लघुकथा लेखक: Dilip Acharya
दैनिक संझना !
आज बिहानै देखी बादल लागी रहेछ, शायद मन बोझीलो भएकोले होला झ्याल बाहिरबाट आएको चराको चीरबिरले पनि मेरो मानशिक शान्तिलाई बीथोली रहेको छ । यस्तो बेलामा केवल तिमीलाई पत्र लेखेर मात्रै मैले मेरो मनको बोझ हल्का गर्न सक्छु , किनकी मेरो जिन्दगीमा घटने हरेक घटनासंग तिमी प्रतक्ष र परोक्ष दुबै रुपले सम्बद्ध छौ, जुन कुरा म प्रष्टै भन्दैछु भने तिमी भने अझै आफ्नै अर्न्तर्द्वन्दमा हराएका छौ । त्यसैले सवै कुरा खुलस्त हुदां हुदैं पनि मैले बिगतका घटनाक्रमहरुलाई एकचोटी पूनः जिवित गर्नुनै म र तिमी दुबैकोलागी राम्रो होला ।
तिमीलाई थाहा छदैंछ, हाम्रो पहिलो भेट आफ्नै कलेजमा भएको थियो । शुरुका दिनहरुमा मेरो अवेर गरेर कलेज जाने बानी थियो भने तिमी चाहीं कक्षा शुरु हुनु भन्दा धेरै अगाडी नै कक्षामा उपस्थित भै सकेका हुन्थ्यौ । साँच्चै भन्दा, शुरुका दिनहरुमा म पढन भन्दा पनि रमाईलोको लागी कलेजमा जाने गर्दथें । तिमीलाई त यादै होला त्यतिबेला हल्ला गर्ने र अरुलाई जिस्काउने काममा नै मेरा दिनहरु बित्ने गर्थे ।
यसै क्रममा ति दिनहरुमा मैले तिमीलाई पनि धेरै चोटी गिज्याउने र होच्याउने काम गरें । त्यसो त शुरुका दिनहरुमा मैले मात्रै नभै कक्षाका सवैजनाले तिमीलाई अनौठो दृष्टीले हेर्ने गर्थे, कारण तिमी न त कसैसंग हिडथ्यौ न कसैसंग कुरा नै गर्थ्यौ । कक्षा कोठामा पनि कालो चश्मा लगाएर बस्ने तिम्रो बानी देखेर मैलेनै तिमीलाई 'पाखे' को उपनाम पनि दीएकी थिए । तर तिमीलाई त्यसरी जिस्क्याउदां मलाई जत्ति आनन्द आउँथ्यो त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढि पीडाको बोध मलाई त्यस दिन भयो जुन दिन मैले त्यो कालो चश्माको रहश्य थाहा पाएकी थिए ।
त्यस दिन अंग्रेजीको कक्षा संचालन भैरहेको थियो, अचानक शिक्षकले तिमीलाई त्यस दिन पर्ढाईने कविता एकचोटी पाठ गर्न भन्नु भयो, तर तिमी भने मूर्तीबतः चुप बसि रह्यौ । शिक्षकले तिमीलाई पूनः आग्रह गर्नु भयो, यता तिम्रो अनुहारमा भने एकदमै अनौठा भावहरु आए, तिम्रो अनुहार एकदमै असामान्य देखियो, तिम्रो अनुहारको रंग यसरी असामान्य रुपले परिवर्तन हुदैं थियो जसले तिमी माथी गहीरो मानशिक दवाब परेको प्रष्टै देखाउँथ्यो । तिम्रो ओठहरु थर्थराए अनुहारमा पसीनाका केहि बुंदहरु देखा परे र अन्तमा तिमीले त्यो कुरा बतायौ, जुन कुरा सुन्दा कक्षाका सवै स्तव्ध भएका थिए। कक्षामा उपस्थित सवैको नजर एकैचोटी तिमीमा गयो। साच्चै ! तिमी आँखा देख्दैनौ थियौ !! । उफ ! कत्रो बिडम्बना !! कत्रो अभिशाप !! । शिक्षकले तिम्रो वास्तविकता थाहा पाउनु भएपछि माफी मागेर तिमीलाइ बस्न आग्रह गर्नु भयो तर म भने भित्र भित्र जलीरहें ।
ओहो ! म बाट कत्रो गल्ती भएछ, एकजना सोझो व्यक्तिको शारीरीक कमजोरीलाई नबुझेर मैले कत्रो नराम्रो व्यंङ्य गरीछु । मलाई आफैदेखी घृणा लाग्यो र आफ्नै आखाँबाट गिर्न थाले म ।
तिमी सधैं सबैभन्दा पहिला कक्षामा आउँथ्यौ भने कक्षा पछि पनि सबैभन्दा ढिला र्फकन्थ्यौ । त्यसैले एकदिन कक्षा समाप्त भएपछि मैले कक्षामा कोहि पनि नभएको मौका पारेर तिमी संग माफी मागेकी थिएँ । तिमीलाई अझै याद याद छ, त्यतिबेला तिमीले कत्ति सरल किसीमले मलाई भनेका थियौं: “ख्याल ठट्टा भनेको साथी साथी बिचमा नै त हुन्छ नी, यसमा माफी माग्नु पर्ने कुरा नै के छ र”। त्यतिबेला तिम्रो त्यो जवाफलाई मैले माफी दिएकै अर्थमा लिएकी थिए भने तिम्रो त्यो शहनशिलता र सरल व्यबहारले मलाई झन तिमी प्रति आदर जगाइ दिएको थियो ।
तिमीलाई शायद थाहा छैन होला त्यति बेला देखीनै मेरो तिमी प्रतिको झुकाव बढदै गयो । विस्तारै तिम्रो सरल स्वभाव र मिठो बोली तर्फ मेरो आकर्षण बढन थाल्यो । किन हो कुन्नी मलाई सधैं तिमीसंग मात्रै कुरा गरीरहन मन लाग्थ्यो, म खाली तिमीसंग मात्र बस्न चाहन्थें, तिमीलाई भेटन चाहन्थें, तिमीलाई हेर्न चाहन्थें। म आफैले यो झुकावको कारण बुझन सकेकी थिईन । विस्तारै मेरा सहेलीहरुले मलाई तिम्रो नाम लिएर जिस्क्याउन थालेपछि मात्रै मैले अनुभव गरें, मेरो तिमी प्रतिको आदरभाव र मित्रता निक्कै पहिले नै प्रेममा परिणत भैसकेको रहेछ ।
साच्चै मैले भित्र भित्रै तिमीलाई प्रेम गर्न थाली सकेको थिएं । त्यो प्रेम नभएर के थियो त; म हरपल तिम्रो साथ रहन चाहन्थें, तिम्रो सुख दुःखमा मैले प्रतक्ष रुपमा आफूलाई सहभागी भएको पाउँथें, मानौ तिमीलाई र मलाई हरेक कुराले एकै किसीमको प्रभाव पार्थ्यो र हरेक नयाँ घटनाले हामी दुबैलाई एकै किसीमको अनुभूति दिन्थ्यो ।
पहिलो प्रेममा प्रेम शुरु भएको धेरै पछि मात्रै प्रेम गर्नेलाई त्यसको जानकारी हुन्छ भन्ने यथार्थको जानकारी पनि मलाई त्यहि बेलामा अनुभूति भएको थियो ।
हुन त म त्यति बेला निकै खुला बिचारकी थिएं, तर तिमीसंग भेट हुने बित्तीकै म त्यसै-त्यसै कमजोर हुन्थें । आफनो मनको भावना तिमीलाई व्यक्त गर्न मलाई निकै गाह्रो भएको थियो र त्यसको लागी मलाई समय पनि निकै चाहिएको थियो ।
त्यसो त मैलै तिमीलाई साच्चैं प्रेम गर्न थालेको थाहा पाएर मेरा धेरै जना साथीहरुले मलाई रोक्न पनि नखोजेका होईनन । फेरी कलेजका केही पुरुष सहपाठिहरु पनि म प्रति आर्कषित भएको र उनिहरुले पनि मलाई एकतफिर् प्रेम गर्ने गरेको कुरा पनि मैले नबुझेकी थिइन तर म भने आफनै बिचारमा अडिग थिएं । आफ्नो बिचारलाई अभिव्यक्त गर्न मलाई केहि समय लागे पनि अन्तमा एकदिन मैले तिमीलाई आफ्नो चाहना बताएरै छाडें ।
तिमीलाई शायद थाहा छैन होला हाम्रै कक्षाको सहपाठी रमेश पनि मलाई एकतर्फी प्रेम गर्थ्यो । उसले धेरै चोटी घुमाई फीर्राई मलाई त्यो कुरा बताउन खोजेको थियो , तर म पनि सधैं उसको कुरा नबुझेझै गरी त्यसै टारीदिन्थे । तर एकदिन जब उसलाई थाहा भयो की म तिमीलाई प्रेम गर्छ, तब उसले मलाई सीधै सो कुरा बतायो । त्यसपछि मैले पनि उसलाई आफूले तिमीलाई प्रेम गर्ने बताएं । त्यतीबेला उसले मलाई भनेको थियो "यौटा अन्धोसंग प्रेम गरेर तिमीले के पाउँछौं?" । तर उसलाई के थाहा की, शारीरीक शुन्दरता र धनको अगाडी उ स्वयं अन्धो थियो । शिक्षाको ज्योति आखाँको ज्योति भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ र ज्ञानको प्रकाश सुर्यको प्रकाश भन्दा वृहत हुन्छ भन्ने कुरा उसले त्यतिबेला बुझेको थिएन, त्यसैले आफ्नो अज्ञानताको अन्धोपनको कारण उ तिमीलाई अन्धो भन्थ्यो। जुन कुराले मलाई निकै चोट पुगेको थियो । तर त्यो भन्दा पनि गहिरो चोट मलाई त्यतिबेला पुग्यो जब तिमीले एकदमै अस्पष्ट र जटिल वाक्यको सहाराले मेरो प्रेमलाई अस्विकार गरीदिएका थियौ ।
वास्तवमा तिमी पनि केहि हदसम्म रमेशकै जस्तै सोचाई राख्दै थियौ , तर साचों अर्थमा हेर्ने हो भने तिम्रो सोचाई बिल्कुल गलत छ । किनकी पहिलो कुरा त प्रेम भनेको व्यापार होईन जुन केहि पाउनको लागी गरीयोस, अर्को कुरा मेरो तिमी प्रतिको भावनालाई तिमीले “दया” को संज्ञा दियौ, तर मलाई लाग्छ तिमीले पनि राम्ररी बुझेका छौ यो दया होईन माया हो ।
मैले तिमीलाई निकै नजिकबाट चिनेकी छु र तिम्रो भावनाहरुलाई पनि बुझेकी छु । त्यसैले तिमीले मलाई भनेका वाक्यहरुलाई मैले आफ्नो तर्फबाट मात्र नहेरी तिम्रो तर्फबाट पनि विश्लेषण गरेकी छु । मलाई लाग्छ तिमीले पनि मेरा भावनालाई आफ्नो तर्फबाट मात्र नहेरी मेरो पक्षबाट पनि बिचार गरीदीयौ भने हामी दुइ बिच कुनै पनि मतभेद र कुनै दुरी रहने छैन ।
यथार्थमा भन्दा , तिमीले आफुलाई जुन रुपमा हेरेका छौ मैले पनि तिमीलाई त्यही रुपमा चाहेकी छु अब मैले आफूलाई जस्तो सोचेकी छु तिमीले पनि मलाई त्यस्तै संझी दियौ भने तिम्रो र मेरो बिचमा कुनै अबरोध रहने छैन ।
हामी बिच न पहिले कुनै अबरोध थियो, न अहिलेनै कुनै मनमुटाव । मलाई लाग्छ हामी बिच केबल केहि अव्यक्त भावनाहरु मात्र थिए, जुन अब पूर्ण रुपमा प्रष्ट भैसकेको छ । त्यसैले मलाई लाग्छ तिम्रो र मेरो बिच न त कुनै बैचारीक मतभेद छ न त कुनै भावनात्मक असामान्यता । जब तिम्रो र मेरो बिचमा यति धेरै समानता छन र हाम्रो लक्ष पनि एउटै छ भने हामी किन संगै नहिडने ?।
मलाई विश्वाश छ तिमी आफ्नो सानो शरीरीक असक्षमतालाई ठूलो मानशीक कमजोरी बनाएर मेरो र आफ्नो दुबैको जिबनलाई एउटै धारामा बग्नबाट रोक्ने काम गर्दैनौं र मेरो यथार्थ बुझेपछि आफ्ना भावनाहरुलाई पनि सहज ढंगमा व्यक्त गर्ने छौ ।
बिहान लागेको बादल विस्तारै हटिसक्यो र आकाश सफा भएर खुलेको छ। रंगी विरंगी फूलको बिचमा बसेर चराहरु वसन्को गीत गाउँदै छन, मलाइ लाग्छ यो पक्कै पनि शुभ समयको शुचक हो ।
ब्रेल लीपी भर्खरै सिक्दैछु त्यसैले केहि गल्ती अवश्यनै भए होलान आशा छ अवश्य नै माफ गर्ने छौ ।
संगीता, काठमाण्डौ !!
आकार 20/12/08 8:34 AM
गफ दिन त सजिलै हुन्छ क्यारे, व्यक्त गर्न चाँहि कठिन नै हुन्छ । अनि सायद संगिताले पहिले नै राजिव को वास्तविकता थाहा पाएको भए, राजिबकै पछि लाग्थिन जस्तो चाँहि लागेन ।
यो संसार नै स्वार्थी छ । राजिव ले भनेको जस्तै सायद संगिताले पहिले दया गरिन, अनि पछि प्रेम भयो । वास्तवमा यो प्रेम मा दया को गन्ध भन्दा पनि बढि प्रायश्चित को गन्ध आउँछ । पहिले राजिब को खिल्ली नउडाएको भए, सायद संगिता मा यस्तो भावना आउने नै थिएन । संगितालाई जब राजिव को अवस्था थाहा भयो, त्यसपछि नै आफूले गरेको प्रायश्चित स्वरुप राजिब तर्फ ढल्केको भान हुन्छ ।
अनि यो शिर्षक को तालमेल बुझ्न सकिन, प्रेम भनेर या देखाएर गरिने त पक्कै होइन । तर पनि संगिताले पहिले नै प्रेमप्रस्ताव राखेकी हुन् कि भन्ने छनक मिल्छ, किनकी मायालाई राजिव कै भाषामा, राजिब ले दया को संज्ञा दिएको छ ।
कथा मार्मिक र वास्तविक लाग्ने भएपनि, राजिव र संगिता एउटै कलेज मा पढ्छन् भन्ने कुराले सायद कोही व्यक्तिविशेषलाई मात्र जनाउँछ, राजिव ले संगिताले सबैको प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर मान्न सकिँदैन ।
समग्रमा भन्दा कथा राम्रै छ । तर यो पत्र कति पछि लेखिएको पनि प्रस्ट छैन । फ्ल्यास ब्याक मा त लेखिएको छ, हाम्रो पहिलो भेट....
हैन, कति वर्ष भयो है, संगिताले राजिबलाई भेटेको ?
Dilip Acharya 20/12/08 8:54 AM
आकार जी !
तटस्थ र प्रेरक टिप्पणिको लागि धन्यवाद् ।
वास्तबमै तपाईले औंल्याउनु भएका केहि कुराहरु कथामा प्रष्ट छैनन् (मैले पनि अनुभव गरेको हो)। पछि लेख्दा लेख्दै कथा धेरै लामो भयो जस्तो लागेर पढनेलाई झर्को लाग्ने ठानी केहि प्रसंगहरु भने अलि 'टालटुल' तालले छोट्याएँ।
पछि फुर्सदमा यसलाई परिस्कृत गर्ने कोशिस गर्छु ।
दीपक जडित 20/12/08 6:17 PM
दिलीपजी , आकारजीले औंल्याउनु भएका कुरामा निक्कै हदसम्म म पनि सहमत छु । कथा भित्र कथा भैकन पनि खासै जमेको देखिएन । कथा भएको कथा भन्दा पनि कथा बनाएको कथा जस्तो के । यता आफ्नै टिप्प्णीमा कथा लामो भएर पढ्नेलाई झर्को लाग्ला जस्तो लागेर टालटुले नीति लिएँ भन्नुभएको कुरा चैं सबैलाई मिल्दो रहेछ क्यार । लेख्दै गर्दा मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ र कतिकुरा स्पस्ट नभएका लेखाई छोडिन्छन् ।
र आकारजी ? निक्कै सिपालु पाराले चिरफार गर्ने तपाईंको यो कलाको तारिफ है । हामी लेखि टोपल्नेलाई तपाईंको खाँचो हुन्छ अघि बढ्न ।
सिकारु 20/12/08 6:43 PM
दिलिप जि कथा ठिकै लाग्यो । लेखाइमा छिट फुट् कमजोरिहरु त आइनै हाल्नेरहिछन् । यो मैले पनि महशुस गरेकै कुरा हो । धेरै लम्ब्याएर लेख्दा पाठकले झर्को मन्नुहुन्छ कि भन्ने लाग्नु पनि स्वाभिक नै हो। अनि आकारजि ले भनेझै पहिला नै राजिवको अन्धोपन थाहा पाएको भए सायद नाता यति नजिक हुने थिएन होला किनकि जब मान्छेले गल्तिको प्रायश्चितको लागि अगाडि बढछ अनि मात्रै उस प्रति मान्छेले सहि र गलतको तराजु तौलिन लाग्ने रहेछ । अनि दिलिप जि प्रेमको भावानालाइ त सारै पोख्त रुपमा पस्कनु भएको छ नि ।कतै तपाई पनि प्रेमपिडित त होइन? हा..हा..हा..
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) 21/12/08 2:48 AM
दिलीप जी - सबै कुराहरु त आकर जी, दीपक जी र सुर्य प्रसाद् (सिकारू जी ) ले नै भनी सक्नु भएको रहेछ , अब मैले के भन्ने -??
तर एउटा कुरा तपाइले यो कथा लेख्दा टाइटल 'अव्यक्त भावना' राख्नु भा छ तर कथामा आफ्नो प्रेम को भावना त प्रपोज स्वरुप ब्यक्त गरी सकेको जनाउनु भएको छ नि ? यो चाहि कस्तो किसिम को तालमेल हो नि ?
Jotare Dhaiba 22/12/08 1:02 PM
निकै मार्मिक कथा लेख्‍नुभएछ दिलीपजी । हार्दिकता र प्रेमिल भावको गहिराइले लफक्कै भिजायो । कथामा कथानकको टेढोमेढो मोड छैनन्, सोझोपन छ । यो पक्ष, कथाको सरलतायुक्त विशेषता पनि हुन सक्छ र कमजोरी पनि । भन्नाले प्लटमा रौनक र घटनाजन्य मोड छैनन् । र पनि कथाको विषयवस्तु र प्रस्तुति असरदार छ ।
र यस्तो आदर्श मायाको भावको लुटपुटाइ त समाजमा अब विरलै पाइन्छन् । त्यस्तो दुर्लभ नमूना पस्किएर कथा पढ्नेहरूमा प्रेमको खास रूप खोतल्नमा तपाईँको कलमले बल पुर्याएको छ ।
Dilip Acharya 24/12/08 7:23 AM
दीपक जी, सिकारु जी, बेदनाथ जी र धाइबा जी !
उत्प्रेरक टिप्पणी र यथोचित विश्लेषणको लागी धेरै धन्यवाद ।
अँ त, म प्रेम पिडीत हैन है!